Ingabe uvame ukusebenzisa e-isikhwama kusukela edume umhlaba uhlelo Webmoney yokukhokha? Uma kunethiwekhi noma enze noma yimuphi ukuthengiselana commercial usebenzisa esikhwameni elekthronikhi ke ngesinye kuphakama umbuzo ngokuqondene imali Webmoney. Lokhu akusona isimanga, izigidi zabantu ukusebenzisa lolu uhlelo lokukhokha ukwenza ukuthenga ezitolo intanethi noma ngesikhathi zokuhlala mayelana nomsebenzi owenziwayo.
I-Webmoney yokukhokhelana ezisebenza ngempumelelo emhlabeni wonke isikhathi eside futhi njalo ngcono. Lokhu kubonakala hhayi kuphela lapho kudluliswa nokuvikeleka. Ukuthuthukisa inkonzo, lula kakhulu inqubo ukusebenza ohlelweni. Okwamanje kutholakala izindlela eziningana ukuze zikhiphe imali, konke kuncike okukhethayo. Indlela imali Webmoney, kuncike ngokuyinhloko yini ikhomishana wena ukulikhokhela sokuhoxiswa imali, futhi mayelana nendlela imali isevisi unquma ukusebenzisa.
Uma unquma ukuhoxisa izimali ngokunikezwa ukuthunywa ubuncane ngokudluliswa yangasese, le ndlela kungaholela ekulahlekelweni imali. Noma kunjalo, ungakwazi ukudlulisa imali kwenye esikhwameni elekthronikhi, umnikazi okuyinto iyadingeka kusengaphambili izokukhokhela inani ukudluliswa kwemali. Ikhomishini nale ndlela cashing ukuphuma ongatheni, kuba ilingane yangaphakathi ikhomishana yokukhokhelana.
Ungafunda kanjani imali Webmoney emahhovisi exchange. Izinto ezinjalo kufanele ilayisensi yokuqhuba imisebenzi e Webmoney. Professionals isebenza kuzo, uzokutshela ukuthi ukuze zikhiphe imali WebMoney. Ubungozi bokulahlekelwa imali nale ndlela cashing ubuncane. Yiqiniso, ngaphezu yangaphakathi yokukhokhelana iKhomishana kuyodingeka bakhokhe ikhomishini futhi exchange iphuzu, kodwa uthola irisidi isiqinisekiso imali, okuyinto akuxhomekile kumuntu.
Ungafunda kusukela abasebenzi asebhange, lapho uvule ikhadi noma akhawunti yasebhange, indlela imali Webmoney. Kumele kukhunjulwe ukuthi iKhomishana kulokhu kuyoba eliphakeme. Ngaphambi okuhlanganisa wallet yakho okwe-elekthroniki okuya lesikweletu, hlola nge abasebenzi asebhange, uma umsebenzi ebhange yokukhokhelana futhi kanjani imali engukheshi Webmoney.
Ukuze afeze ukudlulisa ezifana iyadingeka ukubhalisa isitifiketi siqu, ungathola ukuthi kunoma yiziphi ngokwezifiso. Ungenza ukudluliselwa ku-akhawunti yakho yasebhange futhi imali engukheshi noma ngayiphi indlela oyithandayo. Izinzuzo yokudlulisa ngokusebenzisa uhlelo yasebhange kukhona obungenakuphikwa. Ukwenza Ukudluliselwa ku-akhawunti yekhadi, ungasebenzisa i-amakhadi, ukukhokha ngokuthenga ezitolo noma cashing out imali ATM. Ukwenza Ukudluliselwa ku-akhawunti yasebhange, ungakwazi ubuyise idiphozi sokukhokha imali ebolekiwe nokuningi.
Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukusebenzisa ezinye izinhlelo zokukhokha sokuhoxiswa izimali ngokwenza ukudluliswa kusuka Web Imali, isibonelo, i-Western Union. Bala ikhomishana kulokhu kufanele ibalwe maqondana ohlelweni lokukhokha, esihlinzeka izinsizakalo sokuhoxiswa imali.
Amaholo engeziwe - okuhle noma okubi kudingekile?